China Sodium Bromide Ukwenziwa kunye nefektri | Isihloko
Igama lesiNgesi: Isodium Bromide
Amanye amagama: iSodium Bromide, iBromide, iNaBr
Ifomula yeMichiza: NaBr
Ubunzima beMolekyuli: 102.89
Inombolo ye-CAS: 7647-15-6
Inombolo ye-EINECS: 231-599-9
Ukunyibilika kwaManzi: 121g / 100ml / (100℃, 90.5g / 100ml (20℃
Ikhowudi S: 2827510000
Umxholo ophambili: i-45% yolwelo; I-98-99% yomelele
Inkangeleko: Umgubo omhlophe wekristale
Ukunyibilika kwaManzi: 121g / 100ml / (100 ℃), 90.5g / 100ml (20 ℃) ​​
Ikhowudi ye-HS: 2827510000
IPropati yendalo kunye neekhemikhali
I-1) Iipropathi: I-cubic crystal engenambala okanye umgubo omhlophe oyimbumba. Ayinavumba, ityuwa kwaye iyakrakra.
2) Ukuxinana (g / mL, 25 ° C): 3.203;
3) Indawo yokunyibilika (℃): 755;
4) Indawo yokubilisa (° C, uxinzelelo lomoya): 1390;
5) Isalathiso sokubonisa: 1.6412;
6) Inqaku leFlash (° C): 1390
I-7) Ukunyibilika: inyibilika ngokulula emanzini (ukunyibilika yi-90.5g / i-100ml yamanzi kwi-20 ° C, ukunyibilika ngamanzi ayi-121g / 100ml kwi-100 ° C), isisombululo samanzi asithathi cala kwaye siqhuba. i-acetonitrile, i-acetic acid.
8) Uxinzelelo lomphunga (806 ° C): 1mmHg.
1) Amakhemikhali e-sodium bromide anhydrous ayanyibilika kwisisombululo se-sodium bromide kwi-51 ℃, kwaye i-dihydrate yenziwa xa iqondo lobushushu lingaphantsi kwama-51 ℃.
2) Isodium bromide inokutshintshwa yichlorine yegesi ukunika bromine.
I-3) Isodium bromide iphendula nge-sulfuric acid egxile ekuveliseni i-bromine, oko kukuthi, phantsi kwesenzo se-asidi eyomeleleyo, i-sodium bromide inokudityaniswa kwaye ingenasimahla kwi-bromine.
2NaBr + 3H2SO4 (kugxilwe) = 2NaHSO4 + Br2 + SO2 2 + 2H2O
4) Isodium bromide inokusabela ngokudibanisa isalfure acid ukuvelisa ihydrogen bromide.
5) Kwisisombululo esinamandla, isodium bromide inokusabela ngeeon zesilivere ukuze zenze ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka.
Br - + Ag + = AgBr ngasekhohlo
I-6) i-Electrolysis yesodium bromide ekwimeko etyhidiweyo ukuvelisa igesi yebromine kunye nesinyithi yesodiyam.
2 amandlaabr = 2 na + Br2
I-7) Isisombululo se-sodium bromide esinamandla sinokuvelisa isodium bromate kunye ne-hydrogen nge-electrolysis.
NaBr + 3H2O = i-NaBrO3 yombane + 3H2 electr
8) Ukuphendulwa kwezinto eziphilayo kunokwenzeka, njengempendulo ephambili yokwenza i-bromoethane:
NaBr + - H2SO4 + CH2CH2OH, NaHSO4 + CH3CH2Br + H2O
Ukucaciswa kweSodium Bromide:
Kucacile, kungenambala kumbala otyheli
Uvavanyo (njengeNaBr)% ≥
PH (10% isisombululo kwi-25 degree C)
Iodide (njengoko ndingu%)≤
1) Indlela yoshishino
I-bromine ecekeceke kancinci yongezwa ngokuthe ngqo kwisisombululo esishushu se-sodium hydroxide yokuvelisa umxube we-bromide kunye ne-bromate:
Umxube uyanyuka umphunga ukuze wome, kwaye intsalela eqinileyo edityanisiweyo ixutywe ne toner kunye nokufudunyezwa ukunciphisa i-bromate ukuya kwi-bromide:
NaBrO3 = NaBr + 3 c + 3 co bhala
Okokugqibela, inyibilikiswa emanzini, emva koko icocwe kwaye idityaniswe, kwaye yomiswe kwi-110 ukuya kwi-130 degrees Celsius.
* Le ndlela yindlela eqhelekileyo yokulungiselela i-bromide nge-bromine kwaye isetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso.
2) Indlela yokungathathi cala
Sebenzisa i-sodium bicarbonate njengezinto ezingavuthiyo: nyibilikisa isodium bicarbonate emanzini, emva koko uyiyekise nge-35% -40% yehydrobromide ukufumana isisombululo se-bromide yesisombululo, esixineneyo nesipholileyo ukucutha isodium bromide dihydrate. Amanzi, yehla amanzi e-bromine de umbala we-bromine uvele nje, ishushu, isisombululo kwisisombululo samanzi se-hydrogen sulfide, kwaye uzise emathunjini. kubushushu obuphezulu, i-anhydrous crystallization precipitates, kwaye emva kokomisa, idluliselwe kwisomisi kwaye igcinwe kwi-110 ngeyure e-1.
Umgaqo wokuphendula: HBr + NAHCO ₃ → NaBr + CO2 ↑ + H2O
Nge-40% ye-alkali engamanzi njengezinto ezingafunekiyo: beka i-hydrobromide acid embizeni yokuphendula, phantsi kokunyanzelwa rhoqo, kongeza kancinci i-40% yesisombululo se-alkali, ungene kwi-pH7.5 -8.0, usabele ukuvelisa isisombululo se-bromide yesodium. I-centrifuged kwaye icocwe kwitanki yokugcina isisombululo se-bromide yesisombululo. Emva koko kungena itanki yokuxinana komphunga, isondlo esiphakathi amaxesha angama-1-2, kumxhuzulane othile we-1. Emva koko ucinezelwe kwitanki ye-crystallization, kwi-crystallization yokupholisa evuselelayo, emva koko i-crystallization yokwahlukana kwe-centrifugal, imveliso egqityiweyo.Umama wotywala ubuyiselwa kwitanki yokugcina isodium bromide.
Umgaqo wokuphendula: HBr + NaOH → NaBr + H2O
3) indlela yokunciphisa i-Urea:
Kwitanki yealkali, isoda inyibilikiswa emanzini ashushu kubushushu obungama-50-60 ° C, emva koko urea
Yongezwa ukuba inyibilike i-21 ° Yiba sisisombululo, emva koko kwisitya sokuphendula, ngokuthe chu nge-bromine, lawula ubushushu bokusabela kwe-75-85 ° C, kwi-pH ye-6-7, oko kukuthi, ukufikelela esiphelweni sokuphendula, yeka i-bromine kwaye uxhokonxe, fumana isisombululo se-bromide yesodium.
Lungisa i-pH ukuya kwi-2 ene-hydrobromic acid, emva koko uhlengahlengise i-pH ukuya kwi-6-7 kunye ne-urea kunye ne-sodium hydroxide ukuze ususe i-bromate. Ukuba ityuwa ye-barium igqithile, kungongezwa i-acid ye-sulfuric ukususa.Yongeza ikhabhoni kwinto yokuphendula emva kokususa ukungcola, uyibeke kangangeeyure eziyi-4-6. Emva kokuba isisombululo sicacisiwe, siyacocwa, senziwe ngumphunga kuxinzelelo lomoya, kwaye izinto eziphakathi zizaliswa amatyeli aliqela. Yeka ukondla iiyure ezi-2 ngaphambi kokufakwa kwekristale.Lungisa i-pH ukuya kwi-6-7 iyure e-1 ngaphambi kwe-crystallization.I-bromide yesodium yahlulwa yoma kwi-rotary drum dryer.
Umgaqo wokuphendula: 3Br2 + 3Na2CO3 + NH2ConH2 = 6NaBr + 4CO2 ↑ + N2 ↑ + 2H2O
1) Ishishini elibuthathaka ukulungiselela ukulungiswa kweshukumisi sefilimu.
2) kumayeza ekuveliseni i-diuretics kunye ne-sedatives, esetyenziselwa unyango lwe-neurasthenia, ukulala ubuthongo, ukonwaba kwengqondo, njl njl. Inkukhu enomdla, ifunxwa lula ngaphakathi, kodwa ikhutshwa kancinci, isetyenziselwa ukunciphisa uxinzelelo lwenkukhu olubangelwa zizinto ezinje ngokuhambisa umhlambi, ukuthwala, ukutofa iziyobisi, ukugonya, ukubamba, ukuqokelela igazi okanye ityhefu yeziyobisi.
3) Isetyenziselwa ukuvelisa iziqholo zokwenziwa kwishishini levumba elimnandi.
4) esetyenziswa njenge arhente brominating kushishino yoshicilelo kunye bokudaya.
5) Isetyenziselwa ukulandelela ukumiselwa kwe-cadmium, ukulungiswa kwesicocisi se-dishwasher esizenzekelayo, ukwenziwa kwe-bromide, synthesis organic, iipleyiti zokufota njalo njalo.
Iflowutshathi yeSodium Sulfite
I-1) Isetyenziselwa uhlalutyo lomkhondo kunye nokuzimisela kwe-tellurium kunye ne-niobium kunye nokulungiswa kwesisombululo sonjiniyela, esetyenziswa njengearhente yokunciphisa;
2) Isetyenziswa njenge-stabilizer eyenziwe ngumntu, i-agent ye-bleaching agent, umvelisi wezithombe, ukudaya kunye ne-deachingizer ye-bleaching, i-flavour kunye ne-agent yokunciphisa idayi, i-lignin remover iphepha, njl.
I-3) Isetyenziswe njengesixhobo esiqhelekileyo sokuhlaziya kunye nesixhobo sokumelana nefoto;
I-4) Iarhente yokunciphisa ibala, enefuthe lokuxuba ekutyeni kunye nefuthe elinamandla lokuthintela i-oxidase kukutya kwezityalo.
5) Ishishini lokuprinta kunye nedayi njenge-deoxidizer kunye ne-bleach, esetyenziselwa ukupheka amalaphu ahlukeneyo ekotoni, anokuthintela i-oxidation yendawo yefayibha yomqhaphu kwaye ichaphazele amandla e-fiber, kwaye iphucule ubumhlophe bento yokupheka. umphuhlisi.
I-6) Isetyenziswa lushishino lwempahla eyolukiweyo njengesixhobo sokuzinzisa semicu eyenziwe ngabantu.
7) Umzi mveliso we-elektroniki usetyenziselwa ukwenza izixhasi zefotosensitive.
8) Icandelo lonyango lwamanzi lokucoca amanzi amdaka, ukusela amanzi okusela;
I-9) Isetyenziswa njenge-bleach, i-preservative, i-agent ekhululayo kunye ne-antioxidant kwimveliso yokutya.Ikwasetyenziselwa ukuhlanganiswa kwamachiza kunye ne-arhente yokunciphisa kwimveliso yemifuno enomzimba.
I-10) Isetyenziselwa ukuvelisa iselulose sulfite ester, isodium thiosulfate, iikhemikhali eziphilayo, amalaphu abhlitshiweyo, njl.
11) elebhu isetyenziselwa ukulungisa isalfure dioxide
Unamava angaphezulu kweminyaka eli-15 yobungcali kwimveliso yeSodiium Bromide;
Ngaba ngokusesikweni ukupakisha ngokweemfuno zakho; Ukhuseleko lwebhegi enkulu ngu-5: 1;
1. Kufuneka igcinwe kwindawo eyomileyo, epholileyo kwaye enomoya-kakuhle.Ukuthintela ukukhanya kwelanga, kunye nomlilo kunye nobushushu bodwa, hayi ngeammonia, ioksijini, i-phosphorus, i-antimony powder kunye nealkali kugcino olupheleleyo kunye nezothutho. kwaye iindiza kufuneka zigcinwe kude ukuthintela ukutsha.
2. Kwimeko yomlilo, isitshizi kunye nezitshizi zokucima umlilo zingasetyenziselwa ukucima umlilo.
Egqithileyo Isodium Sulfite
Okulandelayo: Isodium Hydrosulfite
Ulwelo lweCalcium Bromide
Isisombululo seCalcium Bromide
Ulwelo lweCalcium Bromide, IHydrosulfite De Sodium, Isisombululo seCalcium Bromide, Calcium Bromide Anhydrous, IHydrosulfite, Natrium Hydrosulfite,